Muujinta isleeg ka 6 ilaa 9 Bogga 2 - Fadlan U Gudub Dhamaadka Si Aad U Aragto Natiijooyin Badan
Cr + 2ccl3 → 3CrCl2
Waa maxay xaaladda falcelinta ee Cr (chromium) ee uu la falgalo CrCl3 (chromium(iii) chloride)?
Sidee fal-celintu u dhici kartaa una soo saari kartaa CrCl2 (chromous chloride)?
Dhacdada ka dib Cr (chromium) waxay la falgashaa CrCl3 (chromium(iii) chloride)
2ccl3 → Cl2 + 2CrCl2
chromium (iii) chloride koloriin koloriin koloriin ah
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2CrCl3 → Cl2 + 2ccl2
Waa maxay xaaladda falcelinta ee CrCl3 (chromium(iii) chloride)?
Heerkulka: 1300 ° C
Sidee falcelintu u dhici kartaa oo u soo saari kartaa Cl2 (chlorine) iyo CrCl2 (chromous chloride)?
Dhacdada ka dib CrCl3 (chromium(iii) chloride)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2CrCl3 → Cl2 + 2ccl2
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee Cl2 (chromium(iii) chloride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Cl2 (chlorine) badeecad ahaan?
Muujinta isleeg ka 6 ilaa 9 Page 2